Iwe unofanirwa kutora kana kuramba iyo Covid-19 yekudzivirira kana ikave yekumanikidza? Kuitei? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 14 May 2020	• 45 Comments
Zvishoma nezvishoma, vanhu vazhinji uye vari kutanga kuona kuti hurumende pasi rese dzinoda kuchinja zvachose munharaunda zvizere. Iyo "yakangwara yekuvhara" iri zvishoma nezvishoma ichishandurwa kuva imwe yechigarire, uko iwe unofanirwa kudzikinura kwako rusununguko. Iyo itsva yakajairwa inova mita nehafu yenharaunda uye iwe unofanirwa kuzvibhadharira iyo pachako.
Iwe unogona kuhaya anodhura vanopa mazano kuti vakuyambise pamusoro penzira yekumisa kambani yako pane imwe chete nehafu mamirimita uye iwe unogona kuverenga pamutengo weti; kitengo chemutengo chako nekuti pamwe unoda kuwana mvumo yepamutemo yekutora matanho ako uye tagi yemutengi kumutengi, nekuti mumwe munhu anofanirwa kutsvinyira iro mita inosungirwa nehafu uye kudonha kwemari inosanganisira.
Uye zvakare, iyo inotevera covid-19 yekudzivirira inozove yekumanikidza.
Kunze kwemubvunzo wekuti kana yekudzivirira yakadaro yakamboedzwa zvakakwana uye zvakaenzana kure nemubvunzo wekuti kana kwete isu tiri kuda icho chihafu nehafu chemamita yenharaunda: hurumende dzakatsiga uye chaizvo hadziendi kuvanhu vanoratidzira teerera.
Tekinoroji ichashandiswa kuongorora ese matanho. Ndakatofanotaura izvozvo bhuku rangu muna 2019 uye ini ndambofungidzira izvozvo mune zvakawanda zvinyorwa mumakore apfuura. Iyo tekinoroji uye data hombe zvinongozopunzirwa kuburikidza, nekuti kune makambani akawanda kwazvo anogona kuwana rinonakidza nibble zvakare. Vakawanda zvikuru iye zvino vanoshandira makambani mahombe anopa mhinduro dzeIIC kana vamiriri vehurumende vanoona kuti vanogona kuramba vachibhadhara imba yavo nekuchengeta mhuri yavo. Vanhu avo vanogona kuona kuti chimwe chinhu hachina kunaka, asi kana zvasvika pakufanira kusarudza, vazhinji vanosarudza kukotama kuti vasiye mari.
Isu tese tinoziva parizvino kuti sengeyi nzanga itsva ichataridzika. Nhepfenyuro nenyika zvinoramba zvichiti kutengesa kunokosha uye nzira yainotangwa nayo nhanho nedanho. Nhanho nhanho, kuitira kuti mashesi arambe achitenda kuti iwo matanho akakodzera ekuve nekoronavirus.
Maitiro acho achaenda nemafungu kubva 'kumanikidza bhanhire' kuenda 'kungorega itsvo dzichitumbuka' uyezve rinotevera mafungu rinouya. Vezvenhau, nyanzvi (kugadzirwa kwehuwandu) uye zvematongerwo enyika vachatiratidza, mushure menguva yekujaira kune imwe nehafu mamirimita uye zvishoma kamuri yekufambisa, kumutsidzirwa kwehutachiona hwe corona, mushure mezvo kuiswa kwechikamu chinotevera chehuku nevanhu. achambundirwa.
Vaverengi mune imwe nzira midhiya vanowanzo kutsvaga ruzivo rwekuti tinoridzwa sei. Tinoda kuverenga zvakadzama kuwongorora nezvekuti njodzi dzinodzivirira sei, kuti 5G ingashandiswa sei kutikanganisa, ma Microsoft patents anotipa chitupa chedhijitari yekuzvidzivirira, sei Bill Gates anodyara mune zvinobuditsa nhau nekudzivirira indasitiri, maapplication angashandiswa sei kutibatsira kutarisa. Tave nenzara yeruzivo rwekuti sei tiri kufambiswa muwebhu kuti tikwanise kuzunza vamwe nezve njodzi iri kuuya nenzira yedu.
Izvi zvakakosha zvakanyanya, nekuti kana usiri kuziva njodzi iri kukurumidza pauri, hausvetuki padivi nenguva. Nekudaro, panofanirwa kuve nenhanho inotevera. Tinofanira kuuya nemhinduro.
Pano pane webhusaiti iwe wakaverenga zvinyorwa zvakati nezve isu kuti tingaende sei kunharaunda isina mari yakawanda, nzanga mune iyo mapurogiramu, makamera uye data hombe vanoziva chaizvo kwatinenge tiri kana kuti tine tembiricha chaiyo (hapana covid- 19) uye watinosangana naye tese. Nhanho inotevera ndeyokubatanidza iyo yese data kune rudzi rwemaki system. Iine kana isina chikero chakakwana inogona kana kusabudira kunze, nechitima kana mundege. Tese tinogona kuzvifungira izvozvi. Iyo yekubatanidza yeiyo data rese kune inogoneka digemaki chiratidzo uye chinongedzo kune yako yedhijitari bhangi zviyero zvinopedzisa nyaya.
Tiri kupinzwa muwebhu uye neChina chiri kupa muenzaniso wekuti iwe senyika ungamanikidza sei vanhu kuti vatevedze pazviri. China inoratidzawo kuti munhu akamira achipikisa anosiiwa sei. Ndiwo mhedzisiro mhedzisiro yehurongwa hwakadaro. Pakupedzisira, mashesi anozvikotamira, muchikamu nekuti vazhinji munharaunda ivo pachavo vanoshandira zvikamu zve "hurongwa". Kana iwe uine basa muICT uye iwe uchigovera database software kana iwe unopa kamera masisitimu, kana iwe uchishanda semukuru anoongorora kana semupurisa, iwe achiri kusarudza mari yaunotambira. Ndozvazvinoita.
Uku kunyepedzera kutaura, "Ipapo ini ndinokanda smartphone yangu kure kuti ndibude mugadziriro". Tiri kuenda kunguva iyo kutora chikamu munharaunda kunozoita zvisingabviri pasina digiD kana pasina eHerkenning (yemakambani). Izvo zvakafanana zvichaitika neiyo itsva corona tekinoroji. Kana iwe wakarasa yako smartphone, iwe hauchazokwanisazve kupinda mune supermarket.
Zvichauya kune izvozvo here? Nhanho nedanho zvimwe ichauya kune izvo. Uye ipapo iwe unogona chete kurarama kana iwe uine yako yekudyarwa gadheni, asi ipapo zvakare iwe unofanirwa kuwana yako mbeu kubva mazviri, nekuti iyo yekugutsikana iwe pachako ingangovewo yakarambidzwa munguva yakareba.
Nhanho inotevera ichave yekuti hausisiri kubvumidzwa kupinda munzvimbo dzeveruzhinji kana usati wabata mushonga. Uye hombe data ichaitawo basa mune izvi. Kana programu yako ikati wagamuchira gomarara, suo rekupinda musupamaketi rinokutendera kupinda; zvikasadaro. Muchikamu chekupedzisira, yakadaro app inogona kunge ichatsiviwa nehujigital hunhu hwakabatana nemuviri wako. Uye ichave yakakwana chete kana yako bhangi bhandi zvakare yakabatanidzwa kune izvi zvese. Hapazovi nekupunyuka pasina kana iwe ukasarudza kugara 'musango', asi kune vazhinji iro richava bhiriji zvakanyanya.
Tinogona kupururudza zvatinoda; Tinogona kupopota kuti hatidi zvese, asi zvinoita sekuchema mugwenga. Iyo yakawanda inoenderana ne 'system'. Ndosaka yave nguva yekutanga kufunga nezve: Kana iwe usingakwanise kurova 'em, pinda' em.
Isu tinofanirwa kuuya nekongiri mhinduro dzinogona zvakare kukumbirwa nevaya vanoshandira 'iyo hurongwa'. Tinofanira kuuya nekongiri uye zvinogoneka zvigadziriso zvinoita kuti vanhu vasarasikirwe nezvimwe, asi kuti vane zvavanenge vataura. Isu zvino tave kutenderwa zvizere pane zvakatemwa sarudzo kubva kumusoro Iyo iripo yezvematongerwo enyika system inotimanikidza kugamuchira izvo sarudzo pasina chero nzira yekutora chikamu. Izvo zvinogona kuve zvakasiyana. Izvo zvinofanirwa kuve zvakasiyana.
Pane mukana! Mushure mezvose, pane mukana wekuchinja zvakanyanya zvinhu neine tekinoroji nyowani mazuva ano, pasina izvi kutenderedza nzanga yose pasi. Izvo hazvitsvaki kukurumbira kukuru kumukira kana shanduko. Wese munhu anogona kungoramba vachiita izvo zvavanoita.
Chinhu choga chinoshanduka isarudzo yesarudzo. Makurukota nemakurukota ari kuudza korona iyi uye vari kusheedzera kuburikidza nemitemo pasina kubvumidzwa kwevanhu nekukasira vanofanira kuudza vanhu. Makurukota anofanirwa kutsiviwa nevamiriri vakasarudzika vevanhu (avo vanonyatsomiririra vanhu kwete korona).
Zvese izvi zvinogoneka kuburikidza nehungamiro yedemokrasi yakananga. Mukudzvinyirira kwacho kwakananga, unosarudza vamiririri vako pamhepo. Iwe unogona kuve mumiriri iwe pachako kana kuendesa vavhoti uye nzira yekuvhota inovimbisa kusarudzwa uye kukura mukutsigira. Izvo zvishoma senzira yekuvhota senge Holland yeGot Talent uye zvimwe zvirongwa zveTV. Tekinoroji iripo, mikana iripo uye inoshanda.
Nhengo dzeparamende dzakasarudzika dzinofanira kurerutsa mitemo uye kuidzosera kuvanhu kuti vatenderwe kana kuongorora. Kubva kuzviuru zvemirau, kujekesa, kubva kuwanda kusvika kumhando. Kutungamira kuruzhinji rwevanhu.
Tinogona kumirira kusvikira mirairo yekudzivirira yekubvumidza yatibvumidza kusarudza kutora iyo yekudzivirira kana kuenda kujeri, kana isu tinogona kubata iyo simba. Tinofanira kubata dambudziko iri kuti riunze shanduko. Chinja nzira yatinoda! Direct demokrasi inogona kutsiva iyo iripo yemagetsi mamiriro kuburikidza neyekuvhota online system mukati memwedzi mishoma.
Ino ndiyo nguva yekugadzira rutsigiro rweizvi. Nyura iwe mumukana, funga nezvazvo uye uverenge kuti zvinoshanda sei. Inguva yekuita uye kuve shanduko. Dzvanya bhatani kuti uwane rumwe ruzivo uye kusaina chikumbiro.
Zvirwere zvinogona kunge zvakashandiswa pakugadzirisa DNA yako here?
Tags: pane, Apps, guru, Covid-19, dhata, democracy, direct, er, Featured, fvvd, zvinoitika, Ini ndinoramba, paIndaneti, vhoti, Michina, mushonga, vaccination, vaccination chisungo, kuzvipira, Wat, kuramba, kuramba, mutemo
14 May 2020 pa 12: 22
14 May 2020 pa 13: 16
Asi zvakasununguka Martin, Jan Peter anoita basa rekupayona
Vaimbova Prime Minister Balkenende vanoda gomarara rekucona remahara munhu wese
14 May 2020 pa 13: 26
Ah ndafara, saka ipapo hapana chinhu chekunetseka nezvacho.
Huru = kubva muhari yemutero uye nokudaro pakupedzisira kuburikidza nekuwedzera mutero = kwete mahara
17 May 2020 pa 15: 23
Yakavimbiswa kuti iyi iri kuuya kuMadurodam, munguva pfupi kana misa layoffs iri nekuda kwekuparara uku, chinhu chebeche chiri kuna baba. Zvakakwana imbers kuita basa rakasviba ...
Michael Gove anoratidza anopfuura zviuru gumi nezviuru nemazana manomwe emakona ekutora mafoni ava kunyoreswa - vanongonyara kwegumi nematanhatu, - kunyangwe vanoti vari kungopihwa mwedzi mitatu yekutanga.
14 May 2020 pa 13: 23
Covid, saka inomirira Chetifiketi cheVaccination ID (2020)
14 May 2020 pa 13: 33
Vape chigunwe 🖕, uti NO
14 May 2020 pa 14: 41
Iyo 19 kumashure kweCovid inomirira AI, kana iwe ukadudzira mavara kuva manhamba. Saka Setifiketi Yekusiya Kuzivikanwa Chitupa Artificial Intelligence.
Tinogona kufungidzira uko data rese rakabiwa rinopera, iyo Palantir system yechokwadi! Tevera uye Tevera
14 May 2020 pa 15: 33
@riffian Ndizvozvo !!! AI inoda kudyiswa data, o yabiwa hongu chaipo!
Isu tinoda mhinduro dzinokurumidza nezve iyo yakakura NHS COVID data deal
Sei hurumende yeUK ichiramba kuburitsa madhezheni eiyo 'isina kumbobvira' kuendesa data kuUS tech giants? Kana tikasawana mhinduro, tinogona kuzvitsvaga mumatare.
14 May 2020 pa 14: 58
Vhidhiyo yakanaka, kunyanya yekupedzisira iri kuguma neIYO, verenga chinangwa, ndicho chinangwa. Iwo mabara anowanzovhiringidza mazwi.
Heino zvakare kungova kwevaverengi vatsva. Neraki, zvakawanda uye zvimwe zvinowedzerwa. Vanhu vanopawo izvo zvinobatsira Martin zvese. Kurira kwake kwakavimbika uye kwakangwara. Hauverenga izvi kumwe kumwe. Nzvimbo yake inofanirwa kugara yakakwira mudenga. Ona chinyorwa chake nezvekurwiswa kweDdos panzvimbo yake
Icho chakanyanya zvakanyanya kupfuura vhidhiyo yakabviswa yaJensen 33. Izvo, sezvaitarisirwa, zvakabvumiranwa pamusoro peYt. Nekutengesa hembe yake, wobva wataura kuti zvichave zvakanaka. Iye anogara kuVondelpark, saka ane mari semvura. Ini ndino zorora nyaya yangu.
Onawo kuti kangani Jensen akataura kakawanda nezve shangu yemusoja pamutsipa wake.
Uye pano zvakare chiyeuchidzo nei iwe usingafanire kutora iyo pfuti. Kana iwe ukadzidza senge pano pane ino saiti, uye iwe unowana imwe yeruzivo yenhamba. Iwe unoziva here kuti iwe haufanire kana kusatenda zvese zvinotaurwa nenhamba idzi mukati. Uye zvirokwazvo kurega icho ichipinda mumuviri wako.
14 May 2020 pa 18: 34
Bvumirana. Haugone kuwana zvese izvo Martin anonyora kana zvaano fungira, dzimwe nguva anozviona zvakanyanyisa kana kuti zvisinga fungi, asi neruzha rwakasiyana narwo ndiye chirevo 'canary mumugodhi wamalahle' worusununguko rwekutaura muNetherlands. Ino saiti KUSVIRA saka gara kumusoro uye uchimhanya, uye zvechokwadi: vazhinji vashanyi nevatsigiri, zvirinani.
Ini ndinogona kubvumirana nechinyorwa chiri pamusoro, asi ini zvakadaro ndinotenda kuti shanduko dzakatsanangurwa dzinofanirwa kupararira nekufamba kwenguva yakati rebei (kana iwe uchida kuwana vanhu vazhinji sezvazvinogona, uye pamwewo nedzimwe nyika). Vanhu vanofanirwa kutanga vaitwa 'kuibva' kune yakanyanya kushandura shanduko. Zvikasadaro, vazhinji vachatya, iwe uchasangana nechisimba, nyonganiso, kusuwa, uye izvo hazvigone kuve chinangwa.
Enzanisa iyo wmb nemunhu ane makumbo akaomeswa echando--30 madhigiriini munguva yechando yeSweden. Ukangoisa pakarepo pasi pekugezesa, unoita kuti kukuvara kwacho kusadzoreredzeka. Inofanira kuve zvishoma nezvishoma, uye ndizvo zvazvakaitawo neruzhinji rwevanhu. Vape makore gumi ekuita izvi (kunyangwe ndiri kutya kuti isu hatina makore gumi ekudzivirira iwozvino mutemo wemauto kubva pakugara zvachose yemapurisa nyika.
14 May 2020 pa 20: 33
Ini ndinowana inzwi rekudzikisira rekuti 'zvisizvo' uye 'rakanyanya' zvisina kukodzera. Kana rimwe bato risiri rechokwadi uye rakabatikana zvakanyanya, ndiro risingakwanisi kuvhara hurumende.
Haisi iyo pfungwa yaXander pano pane saiti inoverengera seji uye kuti isu tiri kutarisira kuna Mwari wako X kuzvitonga kwakarurama. Yakwana nguva yekudonha rudzi urwu rwekutsoropodza uye kutora matanho. Iva shanduko nekuita.
Ini ndinotenda zvakanyanya kuti chirongwa chitsva chakatsanangurwa pane fvvd.nl chinofanira kumiswa mukati memwedzi mishoma. Hatina nguva yekutambisa.
Ini ndinoramba chaizvo zvawataura. Kana tikamirira mimwe mwedzi yakati wandei, iyo kabhodhi yazvino yakashandura nzanga yose kuita mita imwe nehafu yemagariro uye nzira dzese dzehunyanzvi dzirikuitwa dzinoisa isu muhutongi hwehutongi hwewebhu.
Ini ndaizoti saka: usingaise pane iyo refu track uye uibvise seyanyanya uye isinga fungidziro. Izvo zvakanyanyisa uye zvisinga fungidzike kuti isu tinoramba tichinyunyuta uye tichinyora zvinyorwa apo zvese zvinokanganisa uye kupi nekudzivirira uye zvitupa zvemadhijitari zvinogona kutikuvadza.
Zvinotyisa kuzviisa pakukura kwevanhu. Vanhu zvakare havana kugadzirira aya ekuvhara matanho uye ikozvino taona kuti hurumende iri kusundira 'zvisiri zvechokwadi' uye 'zvakanyanyisa' matanho mukati memavhiki mashoma.
Saka ini ndoti HAPANA nehutsinye zvakanyanya kushoropodzwa kwako uye ndinopa zano rekuti unoshevedza vanhu kuti Tora chiito IZVOZVO. Inguva imwe chete kusvika gumi nemaviri uye hatigone kumirira makore gumi.
Iwe unogona zvakare kubvunza mibvunzo mubvunzo & chikamu chesaiti: https://www.fvvd.nl/qa/
14 May 2020 pa 22: 14
Rose akanyora kuti:
15 May 2020 pa 07: 03
Varapi vanyoro vanoita kunhuwa maronda…
Vanhu vanofanirwa kuzununguswa, asi vanoita sekunge vari mukoma.
15 May 2020 pa 16: 01
Ini ndinowana mhinduro yako kuXander zvinyatso kuchena uye nekuti ini ndine fungidziro yakasimba yekuti Xander haibvumidze. Ini handisi kuzotsanangura izvozvo. Muverengi wenguva dzose anogona kuziva zvandinoreva.
14 May 2020 pa 13: 37
14 May 2020 pa 15: 01
Zvinoshamisa kuti handisati ndamboona clip iya, handina kumboverenga TV uye ndikatarisa CD grey. Chaizvoizvo chinhu chakajeka kwazvo chekutema. Uye zvakare fan yeiyo mimhanzi yeiyi bhendi. Mumazuva ekare.
14 May 2020 pa 13: 56
Yakawedzera kufungidzira hurongwa, script yaive yatobatanidzwa muakafa Zone - PLAGUE yakateedzera muna 2003
14 May 2020 pa 15: 47
Chakakosha clip idd pane kana kutaura nezve corona (ra33oon), Kudonha Kubva kubva muna1993 aine akajairwa fungidziro douglas aive akasiyana muur kumeso.
makumi emamirioni avanhu haachazodikanwa.
14 May 2020 pa 14: 06
Chikamu chepakati / chekirasi chichava chakanyudzwa zvakakwana mune zvemari kweinenge rimwe gore, kuitira kuti munguva pfupi dzinenge dzizoendeswa kuna Baba Nyika kunge makwayana.
14 May 2020 pa 15: 09
Hongu hongu. Nenzira iyi munhu wese anova anotsamira zvizere. Hazvifunge zvakadzama zvekare nekuti yakaponeswa. Chete ndakaponeswa nenzira zvekuti ndinofunga unogona nani kudenga. Uyezve mununuri wako ndiye zvakare akakusundira iwe nemhuri yako nemaune mugomba rakadzikadzika iri. Asi ivo pakutanga vanozoona zvakasiyana. Kusvika zvanonoka, mushure mezvose, vaccin inogona kunge yatove yakapinda muvanhu munyika dzisina kutenderwa mune chero mamiriro ezvinhu. Huya kubva kune zvakajairwa vanofungidzirwa, uye vakazvironga kuchengetedzwa pachavo. Kuzvidzivirira uku kunofanira kukukuvadza nenzira ipi neipi here. Iyo kurongeka inonyatsotaurira iyo nyaya yese.
14 May 2020 pa 15: 28
Heano imwe mhumhi mune zvipfeko zvemakwai Eric Schmidt, vese vanowanzo fungidzirwa vanobatanidzwa mune iyi yekupedzisira yehuranda kushanda. Uye ivo vanosanganisirawo iyo yemamiriro ekunze hoax mune yavo ajenda ivo vari vakabatikana
Bata Inotsvaga Boka Rakapihwa mari naSoros naGates, Ane Chelsea Clinton paBhodhi
'tinofanirwa' kuonga 'nekuda kwemakambani makuru kuti' vanhu vade kutadzira zvakaipa '(Isu tinodaidza iyi FASCISM)
Vhidhiyo yacho yakavanzwa, chaizvo mashandiro avinoita.
14 May 2020 pa 15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (VaTrump chikamu chechinetso, kanganwa Q handshit !! Vimba zano, irwo zano)
14 May 2020 pa 17: 20
VaTrump varikufarira iyo yekudzivirira, ona maitirwo anoitwa Q Q kune ayo.
15 May 2020 pa 16: 41
ZVAKAZVONZWA: Denda raTrump 'hurongwa' hwekuti gurukota rezvekuburitswa kwemashoko rakaponeswa mugwaro rekuratidzira raakanga akabata - rainyevera nezve kushomeka kwevanachiremba, kushomeka kwemari, uye kunyongana kwemubatanidzwa mwedzi isati yatanga.
20 May 2020 pa 18: 50
14 May 2020 pa 15: 46
Ona apa maitiro avo akangwara anotamba mutambo iwoye. Ivo vanongoratidza chaizvo zvavachaita. Verenga vana kubva kumhuri. Pasi peshoko rehutano, uye nekuti hauna dzimba mbiri dzekugezera. Asi rega mumwe munhu akutaurire uyo anonzi anopokana nazvo. Uye inopa varombo kwazvo kuita. Asi iwe une nhamba yakatumira mameseji, inonzi-yekutarisa pamusoro peumwe neumwe. Uye saka vane yako yekutsvaga yekutsvaga nhamba. Ah hongu mwana wako haangamboone zvakare, uye kwete haina kufa kubva kuCovid. Chinyorwa 2, verenga 80123 uye 9. Uye kurasa zvese zvawaive nazvo. Gadzira America …………… .. zvakanaka
Ingotarisa kuburikidza neye mutambi, uye uchaona zvavari kupinda.
14 May 2020 pa 16: 31
Fungidzira kuvimbika kune New World Order
14 May 2020 pa 21: 56
15 May 2020 pa 03: 25
Chero munhu akambovhota muhupenyu hwavo anofanira kusaina chikumbiro ichi. Iye zvino tinogona kuona zvakajeka kwazvo zvinoitika kana iwe uchirega mapepa epaTV achitonga hupenyu hwako. Chete kungotarisisa kuti zvakavakirwa panhema, sekuverenga mune chinyorwa chino. Kuvhota zvakare kunotitora kunyange mukukiya.
Ini zvechokwadi handitore chip kana yekudzivirira, asi kurambidzwa. Chero zvazvingaitika, tinofanira kudzokera kuzvisikwa kuti tizviwane. Kunyangwe Jesu aifanira kuenda kugwenga kunobatana. Handisi kutaura kuti unofanira kutenda muna Jesu, ndiri kungoti tiri munzira imwe chete.
15 May 2020 pa 06: 30
Zvakanaka kuti kuchine vanachiremba vakaita seechiGerman chiremba ichi https://www.youtube.com/watch?v=6bIAXtciwk0&feature=youtu.be
15 May 2020 pa 06: 59
Muvhidhiyo yechiremba wechiGerman mune yekubatanidza link anoti izvo ndezvechokwadi chaizvo .. Mune mutsinga wekutaura kuti Hatifanire kudzokera ku "chekare chakare". Izvi ichokwadi, nekuti zvinoreva kuti zvekare zvakagara zvichiita kutipinza mumamiriro atiri izvozvi. Saka pane chitsva chinodiwa, hachisi iyo mita 1,5 yemagariro neese maitiro ekutarisa, asi iwo akajairwa mutsva ayo anoenderana zvakanyanya kusvika paMartin's FVVD. Zvichida izvi zvinogona kuiswa mumharidzo yeFVVD?
15 May 2020 pa 09: 48
Ndinotenda kuti meseji yaMartin yakajeka kwazvo!
15 May 2020 pa 08: 18
Zvirinani zvangu "musango". Tichangova nyika yakazara tsvina ini ndinorongedza zvinhu zvangu uye ini ndaenda. Ini ndingatozofa nenzara kune imwe nzvimbo pakati penzvimbo pane kurega mabasa angu achibviswa.
15 May 2020 pa 09: 47
Handifunge kuti iwe unogona kuenda kana iro rizere remapurisa riripo. mapurisa emunyika = feudal system, iwe uri chikamu chenyika. Mune hurongwa hwekudyidzana, muranda haakwanise kuita chero chinhu pasina mvumo yemuridzi / yenyika.
Uyezve, iwe unoda kuenda kupi zvese zvakabatana pasi rese, zvakabatana uye zvinodzorwa naZvo. Ini ndinonetseka kana vagari vaunoda kuenda kwavari vakakumirira. Makwikwi aripowo pakati pevanhu. Isu tiri panguva yakaoma saka tinofanirwa kuzvigadzirisa pachedu pano kuMadurodam. Ruzhinji rwevanhu harusati rwazvinzwisisa nezvekusaguma kwekufungidzira.
16 May 2020 pa 10: 51
Pano Martin urizvo izvo nezvese zvakashata, uye kunyanya chimeric athari.
Uye chikamu chepazasi chinobva padzidziso dze Freemason uye yavo yenhau. Mune mamwe mazwi isu tinofanirwa kupindura nekukurumidza. Saka iwe unoona izvo mumwe munhu anogona kubuda mune zvinyorwa zvelebula. Saka zvinhu zvinoisa hupenyu panjodzi, uye kungoisa, ivo vanoda kukuuraya iwe, uye vagadzire nyika nyowani yavo. Maitiro egehena sei nevanhu vazhinji vakajoinha iyi dzidziso.
Iyo induvidual yakaremara nekuuya takatarisana kumeso nehana.
Saka zvinosemesa haatende kuti zvinopora.
Sodhoma, Pedophille, 33 Freemason. J Edgar Hoover
FBI Director, kusangana kwei?
Anotaurawo nezveGiriyedhi, mugadziri wehuku. Izvo muchiHeberu zvinomiririra Galeed.
Verenga mirwi yezvipupuriro zita rechaldee rakaenzana Galeed mu hebrew. Zvese zviri kuratidza mamiriro esungano. Pakati paJacob naLaban gen 31:47 (izvi zvinoreva izvo zvavari kuteera, kwete kuwana munhu kubhaibheri)
Papa Francis encyclical Laudato si (pepa rekudzidzisa) inodaidzira kuuraya vanhu zviuru zvitanhatu.
Ona kutsanangurwa: Uye izvo zvavanoratidzira kuda kuita. VaTrump vanoratidzawo kunge vari kudaidzira muchiuto kuti vabvise munhu wese, averenge akafa. Uye America, iine mazana mana emakumi mairi zvombo mumaoko ayo, zvakare ichagara chinyararire. Bizarre kuti iwe unogona kuwana akadaro mamiriro. Uye ini handitsigiri mhirizhonga. Asi vanowanzo fungidzirwa vanodaro.
17 May 2020 pa 12: 21
Ini ndaizomboramba izvo bvunzo, nekuti ivo vanokwanisawo kuzadza iyo dhata reDNA. Die Schippers ikozvino iri paDSM uye aimbova mukuru weDSM Sijbesma ikozvino ndiye ane mhosva nemiedzo. Tarisa hares inomhanya, vakajairwa vanoswera vachitamba pamativi ese, muka!
Kutamba kwechigaro kwakakwana
17 May 2020 pa 18: 21
Kuti iye achiri nedenderedzwa reshamwari, dzinonyangadza ... ... Izvo zvakare zvakakura kuti zvakajekeswa kwatiri mumaminitsi 13.33. Kunakisa sei dambudziko iri riri kurapwa. Uye zvinonaka sei izvo varanda. Nehurombo, varanda kazhinji ndivo vanhu vane hana. Haugone kutaura nezvevaya vese vatambi.
17 May 2020 pa 14: 29
Nei vaccine kana paine mishonga yakakwana kurwisanisa nefuruwenza?
WHO yakapa $ 20M Chifungo Kufuya COVID-19 Cure - Madagascar Mutungamiri
NaGreatGameIndia -May 16, 2020
Mukuvandudza kwakatyisa Mutungamiri weMadagascar akataura zvakapomhodza kuti WHO yakapa chioko chemadhora makumi maviri emadhora ekupa chepfu COVID-20. Mushonga wemakwenzi unonzi COVID-19 Organics wakagadzirwa kubva kuArtemisia unogona kurapa varwere veCOVID-19 mukati memazuva gumi akadaro President.
18 May 2020 pa 13: 33
MuNigeria, iyo billy goates foundation iri pasi pegirazi rinokudza mushure mekupomerwa kupomhodza, Burundi neTanzania zvakaburitsa WHO / melinda uye mabill zvinhu. Saka zvakare zvinogoneka, tinogona kutora muenzaniso pano.
18 May 2020 pa 18: 05
20 May 2020 pa 08: 46
20 May 2020 pa 10: 46
20 May 2020 pa 13: 42
23 May 2020 pa 15: 43
« Kuderera kwakanyanya kwemari panguva yedambudziko re corona kunotungamira ku hyperinflation: bitcoin ndiyo mhinduro here?
Zvisungo zvinopesana neHurumende Nyaya dzaJordie Zwarts zviri kupinda mumatani, asi hapana chiri kuita »
Kushanya kwakazara: 2.484.057
SalmonInClick op Corona C dambudziko Covid-19 inorangaridza 2003 XNUMX Bl Blaster hutachiona hwakauraya Bill Gates
Amareki op iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza
SalmonInClick op Vangani vanhu veDutch vangatokwanisa kubhadhara mabhiri avo panguva yeiyo corona dambudziko?
ClairVoyance op Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?